अब केन्द्र नछाड्ने कर्मचारीको तलब गाउँमै पठाइने ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब केन्द्र नछाड्ने कर्मचारीको तलब गाउँमै पठाइने !
काठमाडौं, साउन ९ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहमा सरुवा भएर जाने कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँबाट नै तलब पठाउने भएको छ । कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाबाहेक विभिन्न जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका नगएर हैरान बनाएपछि मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीको निम्ति यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमानेको र गएका कर्मचारीसमेत केही दिनभित्र केन्द्र नै फर्किने गरेकोले सम्बन्धित ठाउँबाटै तलब पठाउन थालिएको हो । नेपाल समाचारपत्र खबर छ ।
ट्याग्स: karmachari, कर्मचारीको तलब गाउँमै